मलेशियामा नेपाली अपहरण गरेको अभियोगमा गुण्डा नाईके 'डेबिड' पक्राउ ! - Dial 100 News
शनि, माघ १०, २०७७
मलेशियामा नेपाली अपहरण गरेको अभियोगमा गुण्डा नाईके ‘डेबिड’ पक्राउ !
काठमाडौं । मलेशियामा रहेर गुण्डागर्दीमा समलग्न मोरङका ‘डेभिड’ भनिने दुर्गा बहादुर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् ।
उनलाई प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सिआइबीले मलेसियामा नेपालीलाई अपहरण गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेको हो।
मलेशियाको केलाङ क्षेत्रमा गुण्डागर्दीमा सक्रिय डेभिडलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबार साँझ महाराजगन्जबाट पक्राउ गरेको हो।
मलेसियामा रहँदा डेबिडले आफ्नै रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने दाङका ३५ वर्षीय मोहम्मद रैदासलाई अपहरण गरेको गत जुन महिनामा जाहेरी परेको थियो। पीडितकी श्रीमतीले श्रेष्ठविरूद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। तर, पीडित भने मलेसियामै छन्।
सोही जाहेरीको आधारमा प्रहरीले उनविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारीसमेत गरेको थियो।
हाल उनी मलेसियाबाट काठमाडौं फर्किएको सूचना पाएपछि प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको थियो।
अहिले पीडित मोहम्मदलाई उद्धार गर्ने र श्रेष्ठलाई अदालतबाट थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि लैजाने प्रक्रिया थालिएको प्रहरीले बताए ।
अपहरणको शैली कस्तो ?
प्रहरीका अनुसार डेबिड २२ वर्षदेखि मलेसिया बस्दै आएका छन्। उनको त्यहाँ रेष्टुरेन्ट छ। दाङका रैदास उनकै रेष्टुरेन्टमा काम गर्थे। गत जुनमा उनले रैदासलाई आफ्ना चालकको कोठामा ६ दिन बन्धक बनाएर फिरौती मागेको खुलेको छ।
श्रेष्ठले रैदासकी श्रीमतीलाई ६० हजार रिंगेट रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए।
फिरौती रकम डिपोजिट गर्न श्रीमती दाङस्थित हिमालयन बैंकमा १२ लाख रुपैयाँ लिएर जुन २८ मा पुगेकी थिइन्। श्रेष्ठले उक्त बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न भनेका थिए।
सुरूमा १२ लाख रुपैयाँ मात्र डिपोजिट गर्नसक्ने जनाएर श्रीमती बैंक पुगेकी थिइन्। के कामका लागि डिपोजिट गर्न लागेको भनी बैंकका कर्मचारीले सोधेका थिए। त्यसबेला उनले सबै कुरा भनिदिइन्।
यसपछि हिमालयन बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कुरा पुग्यो। केन्द्रीय कार्यालयले राष्ट्र बैंकलाई भन्यो। राष्ट्र बैंक हुँदै प्रहरीमा कुरा पुगे पनि श्रीमतीले जुन ३० मा अरू तीन लाख रुपैयाँ श्रेष्ठको खातामा जम्मा गरेकी थिइन्।
‘राष्ट्र बैंकले ब्युरोमा खबर गरेपछि अनुसन्धान सुरू भएको हो,’ ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सहकुल थापाले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि श्रीमती काठमाडौं आएर जाहेरी दिएपछि हामीले पीडकलाई खोज्न थालेका हौं।’
श्रेष्ठको खाता बैंक र प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो। नेपाल आएपछि पैसा निकालेपछि श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थापाले बताए।
पेट्रोलमा तारपिन तेल मिसाएर ठगी गर्नेट्यांकर चालक पक्राउ
कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा, मन्त्रिपरिषदमा विकल्प सहितको प्रस्ताव